आज एकैदिन १७० जनामा काेराेना पुष्टि, सङ्क्रमित पुगे १ हजार २१२ | Sandhikharkafm.com
जेठ १६, २०७७ शुक्रबार – नेपालमा आज एकै दिन १ सय ७० जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन् । यससंगै नेपालमा १ हजार २ सय १२ जना सङ्क्रमित पुगेका छन् । आज सम्ममा ५२ जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ । प्रदेश नम्बर २ र ५ मा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित रहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रालयले आयोजना गर्दै आएको नियमित जानकारीका क्रममा प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले संक्रमितको संख्या १ हजार २ सय १२ पुगेको जानकारी दिनुभयो । संक्रमित हुनेमा झापाका २८, सप्तरीका ४, बाराका ४, पर्साका ५, म्याग्दीका १, बाँकेका १०, नवलपरासी बर्दघाटका २, कपिलवस्तुका ५१, रौटहटका ५६, सर्लाहीका ५, रुपन्देहीका १ र दाङका २ जना रहेका छन् ।
संक्रमितमध्ये हालसम्म २०६ जना निको भएर घर फर्किइसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १९ जना डिस्चार्ज भएका छन् । आज सम्म क्वारेन्टाइनमा ९९ हजार ३ सय ३६ जना रहेका छन् । हालसम्म आइसोलेसनमा देशभरी १ हजार जना रहेका छन् । अब भारतबाट आउनेहरुलाइ थप व्यवस्थित बनाइने र उनीहरुलाई हेल्थ किट उपलब्ध गराउने डा. देबकोटाले जानकारी दिनुयो । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको सङ्ख्या बढिररहेको र अझै बढ्न सक्ने भन्दै डा. देबकोटाले क्वारेन्टाइनहरु थप व्यवस्थापन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
अब कोरोना थप फैलन सक्ने भएकाले सर्तक रहन आवश्यक रहेको पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । समुदायमा दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिकह र कमजोर स्वास्थ्य भएकालाइ यसको जोखिम बढि भएकाले सर्तक रहन पनि डा. देबकोटाले आग्रह गर्नुभयो । अब भने सङ्क्रमितको अवस्था हेरिकन, सामान्य, जटिल, अति जटिल अवस्था छुट्याएर उपचार गर्ने हुन पनि सक्ने डा. देबकोटाले बताउनुभयो ।